သတ္တုတွင်းများတွင်အလားအလာ 2018 - Blockchain သတင်းများ
cryptocurrency ကြီးထွားဖို့အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူ, သတ္တုတူးဖော်ရေးကိရိယာများများအတွက်ဝယ်လိုအားအဖြစ်ကောင်းစွာတိုးမြှင့်ထားပါတယ်. တစ်ဦးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကအလုံအလောက်အစွမ်းထက်ကွန်ပျူတာကို access ကိုသူလူတိုင်းကိုတစ်ဦးမိုင်းလုပ်သားဖြစ်လာနိုင်, လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကျော်အခွအေနအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားပြီနှင့်သတ္တုတွင်း၏ယခင်နည်းလမ်းများပြီးသားထိရောက်မှုဖြစ်လာကြပါပြီစဉ်. အတွင်းလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့သတ္တုတူးဖော်ရေးခေတ်ရေစီးကြောင်းကျနော်တို့ခန့်မှန်းကြ 2018.
ယနေ့တွင်အတော်လေးစျေးကြီးပစ္စည်းကိရိယာများသတ္တုတူးဖော်ရေးဘို့လိုအပ်, အထူးသဖြင့်, ဂရပ်ဖစ်ကတ်များ. နောက်ဆုံးဇွန်လတရုတ်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း AliExpress ယင်း၏အသုံးပြုသူများသည်သတ္တုတွင်းခြံအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းဂရပ်ဖစ်ကဒ်များတိကျတဲ့မော်ဒယ်များများအတွက်ပိုမိုတက်ကြွစွာကြည့်ဖို့စတင်ခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံ. ရုရှားမိုင်းလုပ်သားတို့တွင်လူကြိုက်အများဆုံးမော်ဒယ်များ Nvidia ကဂရပ်ဖစ်ကတ်များ-GeForce GTX များမှာ 1060 နှင့် GTX 1070, အဖြစ် Radeon RX480, Advanced Micro Devices ကထုတ်လုပ် (AMD ၏).
ဤအမော်ဒယ်များလူကြိုက်များဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူမသာရုရှားမိုင်းလုပ်သားအကြား, အတိတ်နှစ်တွင်မြင့်တက်သည့် AMD ၏ရှယ်ယာမှတ်သား 64%, Nvidia ကကော်ပိုရေးရှင်းအာမခံ၏တန်ဖိုးနီးပါးရရှိခဲ့စဉ် 88% ၏အစကတည်းက 2017. ကျွမ်းကျင်သူများကတိုးတက်မှုတစ်ခုဟာ Ethereum ကွန်ယက်၏မိုင်းလုပ်သားတွေရဲ့တိုးမြှင့်အရေအတွက်ကများနှင့်အခြားလူကြိုက်များ cryptocurrencies မှစွပ်စွဲကြောင်းပြောပါ. Nvidia ကကြောင်းသရုပ်ဖော် data တွေကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ 6.7% ၏ဒုတိယသုံးလပတ်များအတွက်ဝင်ငွေ 2017 ဂရပ်ဖစ်ကတ်များရောင်းချမှုထံမှလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်, crypto သတ္တုတူးဖော်ရေးအတွက်အသုံးပြုခဲ့ပြီးသော. အဲဒီနှစျခုကုမ္ပဏီများနှင့် ASUS ကကုမ္ပဏီပြီးသား cryptocurrency သတ္တုတူးဖော်ရေးများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထူးခြားတဲ့ဂရပ်ဖစ်ကတ်များထုတ်ပေးမှစတင်ကြပါပြီဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. လည်း, ကျနော်တို့ AMD ၏ 7nm အလုပ်လုပ်ခဲ့ကွောငျးကိုသိပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီက 48 အတွက်ဖြန့်ချိလိမ့်မယ်လို့ core processor ကိုခေါ်တော်မူ Starship 2018.
ကျွမ်းကျင်သူများက, သို့သော်, သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များအတွက်ဝယ်လိုအားကျုံ့သွားကြောင်းသတ္တုတူးဖော်ရေးကိရိယာများထုတ်လုပ်သူသတိပေး. ယောသပ်သည် Moore ကအလိုအရ, အမေရိကန်ဘဏ်ကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီမော်ဂန်စတန်လေတစ်ဦးလေ့လာဆန်းစစ်, သတ္တုတူးဖော်ရေးအတွက်စီးပွားရေးအရအမြတ်မရသောလှုပ်ရှားမှုဖြစ်လာပေမည် 2018.
“ကျနော်တို့အတွက် ethereum သတ္တုတူးဖော်ရေးများအတွက်စုစုပေါင်းဂရပ်ဖစ်ရောင်းအားကယုံကြည်ကြသည် 2017 ဖွစျလိမျ့မညျ $800 သန်းသို့မဟုတ်ဒါ, ကကျဆင်းဦးမည် 50% 2018 ခုနှစ်။”
Moore ရဲ့အမြင်, ဒီကျဆင်းမှုများအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြောင်းပြချက်ကနေ ethereum ကွန်ယက်ပေါ်တွင်ခြုံငုံပိတ်ပင်တားဆီးမှုဆုလာဘ်အတွက်စီစဉ်ထားကျဆင်းမှုဖြစ်ပါသည်5ETH မှ3ETH. ဒုတိယလုပ်ငန်းခွင်၏သက်သေပြချက်အနေဖြင့်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပါသည် (Pow) လောင်းကြေး၏သက်သေပြချက်မှ (POS) လာသောအခါအစားသတ္တုတူးဖော်ရေးပါဝါ, တစ်ဦးပိတ်ပင်တားဆီးမှုဖန်တီးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောဆုလာဘ်ကိုလက်ခံရရှိ၏ဖြစ်နိုင်ခြေစနစ်အတွက်အသုံးပြုသူတစ်ဦး၏ပိုင်ဆိုင်မှုရှယ်ယာမှအချိုးကျဖြစ်ပါသည်. ဗီဂျေးဖြစ်သော Rakesh, ဂျပန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ် Mizuho တစ်ခုလေ့လာဆန်းစစ်, အရမ်းဒီသဘောထားကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့. သူ၏ပထမဦးဆုံးဝက်အတွင်းသေချာဖြစ်ပါသည် 2018, ဂရပ်ဖစ်ကတ်များမရှိတော့ထိုကဲ့သို့သောအီသတ္တုတူးဖော်ရေးအဖြစ် cryptocurrency သတ္တုတူးဖော်ရေးဘို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်.
“ကျနော်တို့ ethereum လာမည့်ခြောက်လအတွင်းတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားငွေပေးချေမှုစိစစ်အတည်ပြုစနစ်ရွှေ့ဖို့ကြည့်ကြောင်းယုံကြည်, သက်သေပြချက်-of ​​Work ကိုဂရပ်ဖစ်ကတ်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူထံမှအထောက်အထား-of လောင်းကြေးဂရပ်ဖစ်ကတ်များမရှိတော့လိုအပ်နေပါသည်ရှိရာရန်။”
Ethereum ကွန်ယက်၏သဘောတူညီမှု protocol ကိုပြုပြင်မွမ်းမံ၏စီမံကိန်းကို Casper ဟုခေါ်သည်. ဒါဟာအသစ်တခုပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုဖန်တီးရန်အထူးပြုကွန်ပျူတာပစ္စည်းကိရိယာများတော့ဘူးမလိုအပ်ကြောင်းညွှန်းဆို; အစား, အသုံးပြုသူများအနေအေးခဲမည်ဖြစ်ကြောင်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ရန်ပုံငွေပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်, နှင့်ပြန်, သူတို့အရောင်းအအတည်ပြုချက်ကိုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်. ထို့ကြောင့်, Casper သတ္တုတူးဖော်ရေးဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကိုတှနျးလှနျနိုငျသောစနစ်တစ်ခုဖန်တီးပေးလိမ့်မည်. လာမယ့်လမ်းဆုံလမ်းခွတွင် Constantinople ပြီးတာနဲ့, ရဲ့အစမှာပေါ်ပေါက်နိုင်သည့် 2018, ရာအရပ်ကိုကြာ, အဆိုပါ Ethereum ကွန်ယက်ကို update ကို activated ပါလိမ့်မည်.
အဆိုပါ Ethereum ကွန်ယက်၏သဘောတူညီမှု protocol ကိုအတွက်အလားအလာပြောင်းလဲမှုနေသော်လည်း, Nvidia က၏ဦးခေါင်းကို, Juan Zhjensjun, ဝင်ငွေ GPU ကိုကနေဖန်ဆင်းတော်သေချာဖြစ်ပါသည် (ဂရပ်ဖစ်အပြောင်းအလဲနဲ့ယူနစ်) crypto သတ္တုတူးဖော်ရေးများအတွက်ရောင်းချမှုရှိနေမယ်လို့, အားကောင်းမောင်းသန် cryptocurrencies နှင့် blockchain များမှာ “ဒီနေရာမှာဆက်နေရန်။”
“ဤသည်အချိန်မရွေးမကြာမီသွားဖွယ်ရှိကြောင်းစျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်, ကျနော်တို့ဖြစ်ကောင်းမြျှောလငျ့နိုငျသောတစ်ခုတည်းသောအရာလာမှပိုပြီးငွေကြေးရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောလူအမျိုးမျိုးတို့တစ်ဖွဲ့လုံးတွေအများကြီးထဲမှာရောကျလိမျ့မညျ. ဒါဟာအချိန်ဖို့အချိန်ကနေပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်, နှင့် GPU ကိုကတကယ်အတော်လေးကြီးလှ၏။”
ASIC (လျှောက်လွှာ-Specific Integrated Circuit) ကြောင်းအဖြစ်ကောင်းစွာထိရောက်သောသတ္တုတူးဖော်ရေးများအတွက်ဖန်တီးခဲ့ချစ်ပ်များ၏ပုံစံတည်ရှိ. ASICs တိကျတဲ့ device ကိုအတွက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်တင်းကြပ်စွာကန့်သတ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထွက်သယ်ဆောင်နေကြ, သောဤလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ကွပ်မျက်စျေးနှုန်းချိုသာခြင်းနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်စေသည်. အဆိုပါချစ်ပ်ကိုပိုမိုအစွမ်းထက်ဖြစ်ကြပြီးအများကြီးလျော့နည်းစွမ်းအင်စားသုံး; သူတို့ဂရပ်ဖစ်ကတ်များထက်ပိုပြီးအမြတ်အစွန်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာများမှာ. ထို့အပြင်, သတ္တုတူးဖော်ရေးခြံအသင်းတော်ကိုနှင့်ပြီးစီးအပေါ်ဖြုန်းဖို့အချိန်ပိုမိုလိုအပ်, ASIC-မိုင်းလုပ်သားနှင့်အတူသင်တို့ရှိသမျှအစုံနေစဉ်.
ဤနှစ်တွင်ပြုလုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများကြောင်းထင်ရှားခဲ့သည်, ထိုကဲ့သို့သော Samsung ကအဖြစ်, Intel က, TSMC, နှင့် Global Foundries, ASIC သတ္တုတူးဖော်ရေးများအတွက် 7nm ချစ်ပ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲခဲ့ကြသည်. chips ထုတ်လုပ်မှု၏ပထမသုံးလပတ်ဘို့စီစဉ်ထားသည် 2018. သူတို့ဟာယခင် 14nm ချစ်ပ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်စွမ်းအင်ထိရောက်မှုတိုးတက်ကြပါလိမ့်မယ်.
ဂျပန်ကအင်တာနက်ကုမ္ပဏီကြီး GMO 7nm ချစ်ပ်အပေါ်အခြေခံပြီးမည်ဖြစ်ကြောင်းအသစ်တစ်ခု ASIC-Miner ကိုဖွင့်ဖို့စီစဉ်ထား. ဒီနည်းပညာနှင့်အတူ mass ချစ်ပ်ထုတ်လုပ်မှုမေလဘို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် 2018. လာမည့်နှစ်တွင် GMO မျိုးဆက်သစ်သတ္တုတူးဖော်ရေးပျဉ်ပြားရောင်းဖို့ ICO ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်. သူတို့ကလာမယ့်မျိုးဆက်သတ္တုတူးဖော်ရေးပျဉ်ပြားကိုဝယ်ခြင်းငှါနည်းလမ်းအဖြစ်တိုကင်ထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်. အပြင်, ကုမ္ပဏီမြောက်ပိုင်းဥရောပတိုက်တွင်သတ္တုတူးဖော်ရေးစင်တာတည်ဆောက်ရန်စီစဉ်:
“ကျနော်တို့မြောက်ပိုင်းဥရောပတိုက်တွင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းဆီမီးကွန်ဒတ်တာချစ်ပ်အသုံးချဖို့တစ်ဦးလာမယ့်မျိုးဆက်သတ္တုတူးဖော်ရေးစင်တာလည်ပတ်ပါလိမ့်မယ်. ကျနော်တို့သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အသုံးပြုသောခံရဖို့ချစ်ပ်များအတွက်ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်း 7nm ဖြစ်စဉ်ကိုနည်းပညာကိုအသုံးပြုပါလိမ့်မယ်, နှင့်ပူးတွဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်မိတ်ဖက့် semiconductor ဒီဇိုင်းနည်းပညာရှိခြင်းနှင့်အတူ၎င်း၏သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအပေါ်အလုပ်လုပ်ကြသည်။”
နောက်ဆုံးစက်တင်ဘာလ, ရုရှား Miner အကြွေစေ့ (RMC) Bitfury ချစ်ပ်နှင့်အတူသစ်တစ်ခုမိုင်းလုပ်သားနေထွက်များထုတ်လုပ်မှုကိုထောကျပံ့ခြင်းနှင့်အတူတူပင်ချစ်ပ်နှင့်အတူအခြားသစ်ကိုမိုင်းလုပ်သား Multiclet ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကောက်ယူ ICO. အဆိုပါ ICO စုဆောင်း $43.2 သန်း. RMC ကပါဝင်ပတ်သက် 15 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် cryptocurrency တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့်လေးကုမ္ပဏီများမှမှီဝဲ, MultiClet အပါအဝင်, SMARTHEAT, Goodwin, နှင့် RadiusGroup. အဆိုပါကုမ္ပဏီ Miner နေထွက်ထုတ်လုပ်မှုစတင်ခဲ့သည်နှင့်, လာမယ့်နွေရာသီအားဖြင့်, တစ်ဦးကိုနောက်မျိုးဆက် Processor ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရည်ရွယ်ထား Multiclet, အရာဖြစ်လိမ့်မည် 35 သတ္တုတူးဖော်ရေးများအတွက်ဆပိုထိရောက်.
ကြောင်းအစွမ်းထက်နှင့်စျေးကြီးပစ္စည်းကိရိယာများထင်ရှားဒါဟာဖြစ်ပါသည်, အလွန်စွမ်းအင်များလွန်းစားသုံးထားတဲ့, အောင်မြင်သောသတ္တုတူးဖော်ရေးဘို့လိုအပ်. ကုမ္ပဏီများသည်သတ္တုတွင်းတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအမျိုးအစားကိုတီထွင်ခဲ့ကြဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, ခေါ်တော်မူသောမိုဃ်းတိမ်သတ္တုတူးဖော်ရေး. အစွမ်းထက်ဒေတာစင်တာများနှင့်အတူကုမ္ပဏီများပစ္စည်းကိရိယာများပေး, နှင့်နောက်ဆုံးစားသုံးသူ၎င်းတို့၏အရင်းအမြစ်များကိုငှားရမ်း. စာချုပ်ကောက်ချက်ချနေသည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးဆောင်နေကြသည်ပြီးတာနဲ့, ထိုကဲ့သို့သော Hashflare အဖြစ်ကုမ္ပဏီများမှ, ကမ်ဘာဦးကသတ္တုတွင်း, bit Miner, နှင့် OxBtc အများအပြား cryptocurrencies ၏သတ္တုတူးဖော်ရေးမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေး.
ဤဝန်ဆောင်မှုများပြီးသားခေတ်မှီနေကြသည်. ဒီလမ်းကြောင်းသစ်အတွက်နှေးကွေးလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ရန်မအကြောင်းရင်းရှိပါတယ် 2018, မိုဃ်းတိမ်သတ္တုတွင်းတခုတတ်နိုင်သည်အတိုင်း, စိတ်ချရသော, cryptocurrency ရရှိရန်နှင့်အဆင်ပြေလမ်း, ဆိုစျေးကြီးပစ္စည်းကိရိယာများမလိုအပ်ပါဘူး. အချို့ဖြစ်နိုင်သောအားနည်းချက်များရှိပါတယ်. မိုဃ်းတိမ်ကိုသတ္တုတူးဖော်ရေးကန်ထရိုက်များ၏ရောင်းချသူမမျှတနိုင်ပါတယ်; ဝန်ဆောင်မှု၏ဒီ type ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့် site ကိုတိုက်ခိုက်မှု hacking လုပ်ဖို့အားနည်းချက်ဖြစ်နိုင်သည်; အသုံးပြုသူများကသူတို့သတ္တုတွင်းဘို့ခံယူကော်မရှင်အခကြေးငွေကျော်မျှထိန်းချုပ်မှုများ; ထိုမှတပါး, unplanned ဆုံးရှုံးမှုအောက်ပါစာချုပ်များအောက်တွင်၎င်း၏အသုံးပြုသူများပြန်လျော့နည်းပေးဆောင်ဖို့ဒေတာစင်တာကိုအတင်းစခွေငျးငှါ.
ယခု, အဘယ်သူမျှမဥပဒေများကိုဖြစ်စေရုရှားနှင့်အခြားနိုင်ငံများမှအတွက်သတ္တုတူးဖော်ရေးလှုပ်ရှားမှုအုပ်ချုပ်နေကြသည်. ရုရှားသမ္မတဦးသိန်းစိန်အမိန့်, သို့သော်, အစိုးရနှင့်ဗဟိုဘဏ်လာမည့်နွေရာသီသတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီများအတွက်အခွန်ကောက်ခံခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန်တည်ထောင်ရန်ရပါလိမ့်မယ်သူကပြောပါတယ်. ဤသည်မှာပဏာမပါမယ်ကုမ္ပဏီများနှင့်ပုဂ္ဂလိကမိုင်းလုပ်သားနှစ်ဦးစလုံးကိုရည်ညွှန်းပါလိမ့်မယ်.
ဒီဇင်ဘာလတွင်, လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအပေါ်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကသမ္မတအောက်ရှိကော်မရှင်နာ, Boris Titov, နှုန်းမှာ crypto သတ္တုတူးဖော်ရေးအပေါ်တစ်ဦးအခွန်မိတ်ဆက်အဆိုပြုထား 14%.